Ndiani achabhadhara mari yekuenda kana uchiendesa micheka?
Chinhu chaicho chinonakidza chekuti tinotaurirana zvakanaka nevatengi vedu panguva dzekutengeserana kwenyika dzese, asi pakauya ma carg akamirira kusunungurwa, mamwe matambudziko matsva akaonekwa ....
Iwe une MOQ chii chako mucheka MOQ?
Pakati pekutengesa machira, mapoka anogara achibvunza uyu mubvunzo: chii chako MOQ? Kazhinji hatina MOQ yemachira edu, ndiko kuti, MOQ yedu izere rwakapetwa rwemhando yakawanda yemachira ...
Chii Chitsva Kune Zebra Jira
Groupeve yagara yakazvipira kuve imwe yeakanakisa zebra inopofumadza machira fekitori. Munguva pfupi yapfuura, Groupeve yakagadzira imwe nyowani mbatya. Jira rembizi ratakaita i ...
Boka rejira machira ezvitoro
Une stock? Vatengi vanogara vachibvunza uyu mubvunzo. Hongu isu tine stock yemamwe machira akajairwa asi tinoda kutarisa mushure mekurairwa kwasimbiswa uye inogona kungochengeta stock kwemazuva matatu. vatengi vasati vabhadhara, iyo ...
Boka reNew Outdoor Acrylic Fabric Unganidzo
Acrylic machira anonyanya kushandiswa kugadzira zvigadzirwa zvekunze. Iko kuita kweacrylic machira kwakanaka kwazvo, uye kunoita basa rakakura muhupenyu hwedu. Acrylic jira rine zvakanakira isapinda, stai ...
Ndeipi sarudzo yakanakisa yemucheka wezuva wakasviba
Roller blinds akaita basa rakakura rekuvhara zuva, uye akatowedzera kuwedzera kupisa. Nekuti mapofu aya machira, vagadziri vazhinji vanowedzera linings kwavari. Kana izvi ...
Iwo akanakisa mapofu ekukudzivirira kubva pakupisa kwezhizha
Isu tave mukati mekurwadziwa kwezhizha. Izvi zvinoreva kuti pamusoro pekushandisa mazuva akareba uye ane husimbe padziva, zvinounzawo hunyoro hwakanyanya uye tembiricha yekubheka ...
China fekitori roller inopofumadza jira rezhizha
Zhizha riri kuuya uye vatengi vazhinji vanoronga kuisa mapofu ekuramba kupisa. Iwo akanakisa mapofu anogona kudzora mwenje, kuwedzera kuvanzika, kunatsiridza kurara kwako, uye kudzikisa simba c ...
Ndiani achabhadhara mutsauko wekutakura mukutengeserana kwenyika dzese?
Sezvo munhu wese achiziva mutakura wegungwa wakasimudzwa kubvira COVID-19 kwete chete kune yedu yekunze yekunze asi yezvizhinji zvezvigadzirwa kutenderera pasirese, isu tinonyatsosuwa isu tinogona kushandisa 1500usd kutumira 20ft mudziyo 320 ...
Nei mamwe eedu akaenzana machira masikisi akasiyana neakagamuchirwa nemutengi
Munhoroondo yedu yekutengeserana kwepasirese, tichasangana nevanhu vazhinji vasingatinzwisise, nhasi tichagovana nei tichipa mutengi urefu hwakareba uye hupamhi, asi ivo vanova imwe d ...
Yakanakisa Kunze Kwezuva Chigadziko Mucheka Pane Tight Budget
Kana iwe uchitsvaga 5% kuvhura sunscreen jira re ziptrack blinds, isu tinokurudzira yedu MagicalTex yekunze sunscreen machira. 2m / 2.5m / 3m upamhi huripo. Mavara gumi esarudzo. Uye iyo sampl ...
100% polyester nyowani mbatya jira dhizaini
Tinogona kugadzirisa yedu 100% polyester nyowani mbatya jira kwauri pakupedzisira! sezvazviri pazasi ese mapatani matsva akasiyana needu akajairwa mhando, uye mutengo unozowedzera competi ...
Kero: Kwete. 988 Middle Chikamu cheJiannan Avenue, High-Tech. Nzvimbo, Chengdu, China.